मोदीले धाराप्रबाह भाषण ठोक्दा किन कागजमा हेरेर भाषण गरे हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले? « हाम्रो ईकोनोमी
मोदीले धाराप्रबाह भाषण ठोक्दा किन कागजमा हेरेर भाषण गरे हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले?
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा छन्। यसै सिलसिलामा हिजो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा एउटै मन्चमा उभिएर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे। दुवैले आआफ्नो भागको मन्तव्य दिए। औपचारिक भ्रमणका क्रममा हुने थुप्रै कार्यक्रम मध्ये यो एउटा नियमित कार्यक्रम हो।
पत्रकार सम्मेलनको तस्वीर वा भिडियो राम्ररी नियाल्नुभयो भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरु उभिएको ठाउँमा भन्दा थोरै अगाडि माथिपट्टि सिसा भएको एउटा स्ट्यान्ड देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको दायाँ र बायाँ, थोरै अगाडि यस्तै स्ट्यान्ड देखिन्छ। यो विशेष प्रकारको उपकरणलाई भनिन्छ, प्रम्प्टर वा टेलिप्रम्प्टर। यसले प्रोजेक्टरले जस्तै काम गर्छ जसमा हेरेर टेलिभिजनहरुमा कार्यक्रम वा समाचार प्रस्तोताले पहिले नै तयार पारिएका स्क्रिप्टहरु वाचन गर्दछन्। कम्प्युटरसँग जडान गरिने यस्ता उपकरणमा कम्प्युटरबाटै पाठ वा मन्तव्य लोड गर्न सकिन्छ र वक्ताको बोलीको गतिअनुसार स्वचालित अवस्थामा राख्न सकिन्छ। वक्ताले आरामसँग त्यसमा हेरेर वाचन गर्न सक्छ। सार्वजनिक समारोहहरुमा पनि यसखालको उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा देखिने अक्षरहरु एकापट्टि अर्थात वक्ता भएको दिशाबाटमात्र देखिन्छ।